Hamarana ny krizy politika ao Sri Lanka ve ny famerenana amin’ny toerany ny praiminisitra Ranil Wickremesinghe? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2018 5:32 GMT
Sary avy amin'ny We Want Democracy – Fihetsiketseham-panoheran'ny vondron'olom-pirenena ao amin'ny Lipton Circle, Colombo tamin'ny 12 Desambra. Sary nandalo tao amin'ny Groundviews. Nozaraina araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny 16 desambra 2018, naverina ho eo amin'ny toerany amin'ny maha-praiminisitra azy ao Sri Lanka indray Atoa Ranil Wickremesinghe izay vao voaroaka tamin'io toerana io, ke mety hamarana hatreo ny krizy ara-politika naharitra efa ho roa volana izao.
Ny omalin'io, ny asabotsy 15 desambra 2018, niala ny praiminisitra mampiadihevitra Mahinda Rajapaksa taorian'ny didim-pitsarana iray nanakana azy tsy handray io toerana io sy nanohitra ny fanendrena azy.
Ranil Wickremesinghe nanao fianianana amin'ny maha-praiminisitr'i Sri Lanka azy izay mety hamarana hatreo ny krizy politika maharitra 51 andro.
Nisioka i Wickremesinghe:
Fandresena ny androany tsy ho ahy ihany na ho an'ny UNP ihany. Fandresen'ny andrim-panjakana demaokratika sy ny fiandrianam-pirenen'ny olom-pirenentsika. Mankasitraka ireo rehetra niaro tamim-pifaharana ny lalampanorenana sy niantoka ny fandresen'ny demaokrasia.
Niaro ny hetsika nataony ny mpitondra ny firenena amin'izao fotoana izao, ny filoha Maithripala Sirisena, izay nanafaingana ny fisian'ny krizin-dalampanorenana ao Sri Lanka tamin'ny fanesorana an'i Wickremesinghe amin'ny maha-praiminisitra azy tamin'ny 26 oktobra ary nanendry ny filoha teo aloha sady mpikambana ao amin'ny fanoherana ao amin'ny Parlemanta Mahinda Rajapaksa hisolo toerana azy, tamin'ny filazana hoe:
“Na dia ho alefa any am-ponja aza aho, ny fanapahan-kevitra mety araka ny fikasana tsara nataoko ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy dia mbola hosoratana amin'ny vato indray andro any” : fanambaràna nataon'ny filoha Sirisena taorian'ny namerenana tamin'ny toerany ny praiminisitra Wickremesinghe androany
Naaton'ny filoha Sirisena nandritra ny telo herinandro ny parlemanta tao amin'ny firenena ary nofoanany ny filankevitry ny minisitra. Nanohitra ny fanesorana azy i Wickremesinghe, nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana izany, ary nahazo mpanohana maro izy mitaky ny hamoriana indray ny parlemanta hanao fitsapa-pitokisana. Jereo ny randram-baovaon'ny Groundviews amin'ity krizin-dalampanorenana ity.
Saika ho isan'andro no nanaovan'ny olom-pirenena Sri Lankey ny fihetsiketseham-panoherana hatramin'ny nanombohan'ny krizy, nijoro hiaro ny demaokrasia.
“Tsy hijoro hiaro an'i Ranil aho eto. Hiaro ny demaokrasia sy ny fitantanana tsara no ijoroako eto.” Fihetsiketsehan'ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny Liberty Circle amin'izao fotoana izao.
Nilefitra teo anoloan'ny fanerena ny filoha Maithripala Sirisena ary namory ny parlemanta indray tamin'ny 14 Novambra, saingy notsipahiny ny fitsipaham-pitokisana roa nahatra tamin'i Rajapaksa. Nankany amin'ny fitsarana i Ranil Wickremasinghe sy ireo parlemantera 121 hafa nitady ny quo warranto, izay mitaky amin'i Rajapaksa izay fahefana nanome azy ny andraikitra hisahana ny biraon'ny praiminisitra. Tamin'ny 3 desambra ny Fitsarana Ambony Sri Lankey namoaka didy vonjimaika manaisotra an'i Rajapaksa hiala ao amin'ny biraon'ny praiminisitra mandra-pahitana ny sonia nanendrena azy.
Nivoaka tamin'ny 13 desambra ny didim-pitsarana manantantara mamerina amin'ny toerany ny parlemanta ary manome baiko ny Filoha hanafoana ny fanendrena maha-praiminisitra ny depiote Rajapaksa.
Vaovao farany: Mandidy ny Fitsarana Tampony fa tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana sy tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny filoha Sri-lankey Maithripala Sirisena hanafoana ny Parlemanta
Lahatsoratra bilaogy iray tao amin'ny Groundviews no nanatsonga ny mpahay lalàna Dinesha Samaratne, izay nilaza fa tokony horaisina tsara sy hanaovana fankalazana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony :
Nijoro tsara ny Parlemanta ary ny fitsipaham-pitokisana nataony tamin'ny depiote Rajapakse (tao anatin'ny latsabato roa miavaka tsara) sy ny fanambaram-pitokisana ny praiminisitra Wickremesinghe no mametraka mazava fa mbola atokisan'ny maro an'isa ao amin'ny Parlemanta i Ranil Wickremesinghe. Ny lala-tokana irosoana dia ny hanafoanan'ny filoha ny lazaina ho fanendrena ny depiote Rajapakse ho praiminisitra sy ny lazaina ho fanendrena ny governemanta. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny statu quo talohan'ny 26 oktobra.
Notsongain'ny tantaran'ny Groundviews ihany koa ny mpahay lalàna Luwie Ganeshathasan, izay nilaza fa :
Ny fanapahan-kevitra no nanamafy indray ny zon'ny Sri-Lankey ho entina araka ny Lalampanorenana sy handray anjara amin'ny fifidianana araka ny fombafomba napetraky ny lalàna, mifanohitra amin'ny fiangetsan'ny olona iray.
Ashraf Hegazy sy Gary Milante nanamarika tao amin'ny Groundviews fa tsy voamariky ny gazety iraisampirenena loatra ny krizy politika nihatra tao amin'ny firenena :
Ny setriny nataon'ny Sri-lankey tamin'ireo toe-javatra ireo no maneho ny faharetana natsangan'izy ireo tamin'ny rafi-pitondran'ny governemanta sy ny fitsipika ara-tsosialy.
Tamin'ny 16 Desambra, nampahatsiahivin'ny mpiserasera ny fanambaràna nataon'ny Filoha Sirisena tamin'ny novambra fa hiala avy hatrany izy raha miverina amin'ny toerany i Wickremesinghe.
Marina tokoa ve, misy afa-manontany an'i @MaithripalaS / @PMDNewsGov ve hoe nahoana no mihoatra ny adiny iray aty aorian'ny nanaovan'i Wickremesinghe fianianana no mbola filoha hatrany izy ary tsy niala tamin'ny toerany ?
Mientanentana loatra aho amin'ny rahampitso ! Tsia, tsy amin'ilay hoe lasa praiminisitra indray Atoa Ranil Wickramasinghe. Fa mba te-hahita ny endrik'Atoa Maithreepala Sirisena ho lasa boramena rehefa mihaona amin'ny depiote UNP – ary mahatsiaro sadaikatra.
Araka ny tatitry ny fampitam-baovao, ho apetraka amin'ny fomba manetriketrika ny governemanta vaovao amin'ny 17 Desambra 2018, ka ho ampidirana parlemantera enina avy amin'ny antokon'i Rajapaksa sy Sirisena avy amin'ny Antokon'ny Fahafahan'i Sri Lanka (SLFP). Nilaza ny Antokon'ny Firaisampirenena (UNP) an'i Wickremesinghe fa vonona ny hiasa indray miaraka amin'ny Filoha Maithripala Sirisena, izay “voatariky ny vondrona sasany ho any amin'ny lalan-diso” namely ny firaisankinan'ny governemanta. Tamin'ny Aogositra 2015, nanangana ny governemantam-pirenena ny antokon'i Sirisena sy Rajapaksa (SLFP) sy ny antoko UNP notarihan'i Wickremesinghe taorian'ny nanasoniavana fifanarahana iray.
Ao amin'ny bilaoginy ny poeta, mpanao tsikera, mpanao gazety ary mpaneho hevitra ara-politika Sri-Lankey Malinda Seneviratne nanontany ny fanontaniana lehibe momba izay hitranga aorian'ny didim-pitsarana :
Aiza ho aiza moa izany isika izao ? Izao izany, Ny Filoha tsy afaka manafoana ny Parlemanta araka izay tiany. Ny Parlemanta tenany ihany koa tsy afa-mihetsika noho ny fako taritarihan'ny parlemantera, amin'ny Mpitondrateniny (filoha) mitongilana tanteraka, amin'ny Filoham-(pirenena) mafiloha ary amin'ny didimpitsarana iray. Ho hitantsika eo raha fa-mitraka mihoatra noho teti-panorony ara-politika sy izay kinendrin'ny tenany manokana ireo mpiantsehatra fototra amin'ity teathra ity hamahana zavatra maro.
Mbola sarotra ny haminavina hoe ho tahaka ny ahoana handehanan‘ity “governemanta vaovao” ity eo amin'ny krizy sy ny fahasamihafana ara-politika misy eo amin'i Sirisena sy Wickremesinghe.